FAKANA AN-KERINY TANY TSARATANÀNA : NATAKALO VOLA 20 TAPITRISA ARIARY SY FINDAY 18 ISA ILAY RAIM-PIANAKAVIANALa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYFAKANA AN-KERINY TANY TSARATANÀNA : NATAKALO VOLA 20 TAPITRISA ARIARY SY FINDAY 18 ISA ILAY RAIM-PIANAKAVIANA
FAKANA AN-KERINY TANY TSARATANÀNA : NATAKALO VOLA 20 TAPITRISA ARIARY SY FINDAY 18 ISA ILAY RAIM-PIANAKAVIANA
Nihoapampana ny vola aman-karena notakian’ireo jiolahy mpaka an-keriny ilay raim-pianakaviana, mpandraharaha, monina ao amin’ny distrikan’i Tsaratanàna vao avotra ny ainy. Vola nitentina 20 tapitrisa ariary niampy finday am-polony sy fahana an-jatony no tsy maintsy nefain’ireo havany.
Misedra ny tebiteby amin’ny asa fakàna an-keriny ireo mponina any ambanivohitra ary tsy avelan’ireo olon-dratsy raha tsy manefa vola aman-karena. Toy izany no niseho tany Anjokozoko, kaominina Andriamena, distrikan’i Tsaratanàna izay tsy maintsy nanaovana takalo vola mitentina 20 tapitrisa ariary ho fanavotana ny ain’ilay raim-pianakaviana, mpamboly sy mpiompy.
“Tamin’ny alatsinainy teo no nofaohan’ireo olon-dratsy tao an-tanàna io raim-pianakaviana io, ary notazomin’izy ireo roa andro. Ny faneken’ireo havany hanome vola mihoapampana no nahafahany nahita indray ny fianakaviany”, hoy ny fampitam-baovao voaray avy eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena.
Vao nentin’ireo olon-dratsy nanaraka azy ilay raim-pianakaviana dia fantatra fa vola 40 tapitrisa ariary no notakian’izy ireo tamin’ny ankohonany, tamin’ny alalan’ny antso an-tariby. Niezaka ny nifandraharaha tamin’ireto mpaka an-keriny anefa ireo havany ka nanaiky ny nampihena io tetibola io izy ireo, saingy nanizingizina ny tsy maintsy nomena finday sy fahana. Nilaza ho voatery nanaiky izany ny havan’ilay olona notanana an-keriny noho ny fanahiana ny ainy.
Fantatra àry fa finday 18 isa izay tsy maintsy nampiarahina tamin’ny fahana miisa 100 no namenoana izay tsy feno tamin’ilay vola an-tapitrisany. Ny alatsinainy teo àry no nampahafantarin’ny fianakavian’ilay nalaina an-keriny tamin’ireo mpitandro ny filaminana fa tontosa ny takalo ary tafody an-trano ilay rangahy.
Tsy ny any amin’ny faritra avaratry ny Nosy irery anefa no isehoan’ ity endrika fakàna an-keriny ity, fa lasa andavanandrom-piainan’ireo mponina any Atsimo ihany koa. Ny tsy fisian’ireo omby hangalarina no isany nohazavain’ny mpitandro ny filaminana fa anton’izany.
Olona am-polony nalaina an-keriny tany amin’ny faritra Atsimo, ohatra, no fantatra fa maty noho ny tsy fahazoan’ireo olon-dratsy izay notakiany, nanomboka tamin’ny taona 2017. Tsy ambakan’izany ihany koa anefa ny nisy teto an-drenivohitra tato anatin’ny telo herinandro. Teratany Karana 4 mantsy no lasibatra, ary iray monja tamin’izy ireo no efa tafaverina eo anivon’ny fianakaviany.
Partager la publication "FAKANA AN-KERINY TANY TSARATANÀNA : NATAKALO VOLA 20 TAPITRISA ARIARY SY FINDAY 18 ISA ILAY RAIM-PIANAKAVIANA"
Wilfred Wittekind 08/12/2018 at 03:30 Repondre
click here 18/12/2018 at 02:04 Repondre
Colin Mcwilliam 21/12/2018 at 17:27 Repondre
Markus Verra 22/12/2018 at 15:57 Repondre
Arnold Degrand 01/01/2019 at 11:58 Repondre
Gisela Novak 16/01/2019 at 19:01 Repondre